Emma ke Chatroom - Ihlabathi Ividiyo Dating
Emma ke Chatroom – Ihlabathi Ividiyo Dating
U-Emma Chatroom yi lwethelevijini uphawu kuba abantwana kwaye kulutsha, esibizwa filmed e-Australia, Egermany kwaye Singapore. Uphawu ngu ekhutshwe ngu-southern Inkwenkwezi Entertainment ngentsebenziswano ne-NDR, Ikhusi e-Australia kwaye Australian isiqhagamshelanisi Ithoba Womnatha.
Kweyenkanga ukuya. Ukususela ngojanuwari abantwana ke isiqhagamshelanisi Dating USA wedijithali. Ngonyaka emva Emma kwaye Ally njengoko exchange abafundi kwenzeka Singapore, kufuneka yokusebenza, ezimbini emva umdaniso ngexesha esikolweni festival emva zabo ekhaya amazwe Sasejamani kwaye e-Australia.
Wakhe, umhlobo Cassandra emva Singapore
Ingakumbi Emma, parting ufumana kunzima, ngenxa yokuba yena iwele ngothando kunye Cassandra ke umzalwana, Yosh. Imizwa yakho ingaba ngokusekelwe reciprocity, oko akunjalo admit, ekuqaleni, kodwa zombini ngathi. Yosh unika u-girls ifilim kwi-USB-Intonga nge private lencoko, kunye mobile PIN elithile. Hardly emva uzamile oku, behamba andwebileyo zonke izixhobo zombane ye-ezintathu kwaye ngamnye kubo yenza i-stencils shock. Ngexesha elithile kamva, girls ukufumana kwabo ngendlela engaqhelekanga, nanto ehlabathini kwakhona. Emva ukholelwa, xa kuqaliswayo, ukuba stencils shock bambulala kubo bonke ezintathu, uyayiqonda into yokuba ufuna kwi-Cyberspace ezifunyenweyo. I-girls uza kufumana ngaphandle njani uyakwazi kubuyela yi-ungena ezithile ifowuni PINS ekhaya kwaye njani kuni abanye ngale ndlela zabo ekhaya kutyelela amazwe.
Ufuna ukugcina incoko igumbi, kodwa efihlakeleyo
Kunye, ezintathu amava kwi-zahlukeneyo ekhaya amazwe Abahlobo kuba abaninzi adventures kwaye musa baqonde ukuba abaphila ne enjalo efihlakeleyo ayikho ngoko ke, kulula. Ngaphezu koko, Uemma, ngubani madly ngothando kunye Cassandra ke umzalwana, Yosh, ifuna a reunion. Ngoko ke ubuya ityhile ye-lencoko, ngenxa Yosh ikholelwa ukuba Emma kwi Hamburg, Ijamani. Nje Cassandra kwi-Hamburg learns Nicholas kukuba umhlobo ka-Emma ke, u-kuwa ngothando kwaye yonke into uba ngakumbi enzima. Ally ubomi kwi horse ifama, ngaloo Dan ngokuphonononga phandle ukuba usapho ayina ixesha. Ally kukho ayi, kodwa kubonakala ukuba spark phakathi kwabo. Kanjalo, Cassandra, Uemma kwaye Ally nako ukusebenzisa Cyberspace ukuhamba, kanjalo kwi-National Umdaniso Championships kwi-Singapore, ukuba bathathe inxaxheba kwaye uzame, nangona ixesha shift, ahlangana rhoqo kwi-Singapore kwaye ukuqeqesha kunye zabo umdaniso utitshala Michelle kuba umdaniso ukhuphiswano.”Emmas Chatroom”ukususela kweyomqungu ukuya kweyethupha, exclusively ngomhla wokuqala iindawo ezintathu kwi-amazwe: Germany (Hamburg), e-Australia (i-sydney) kwaye Singapore
I-american Ividiyo Dating Incoko Germany, free lencoko kwi-intanethi ngaphandle ubhaliso ngoku kwi-intanethi →